Kooxaha isku haya siyaasadda dalka Yemen ayaa ku heshiiyey gole kumeel-gaar ah - Wargane News
Home Somali News Kooxaha isku haya siyaasadda dalka Yemen ayaa ku heshiiyey gole kumeel-gaar ah
Ururada dalka Yemen ee ay u dhaxayso colaadu ayaa ku heshiiyey gole loogu magacdarey Golaha Shacabka ee kumeelgaarka ah, kaas oo dalka ka saaraya xasaradda siyaasadeed, waxaana heshiiska ka soo shaqeeyey dhex-dhexaadiyaha ka socda Qaramada Midoobey Jamal Benomar .
Heshiiskan oo baxay maanta oo Jimce ah kadib markii awoodda dalka Yemen ay boobeen Malayshiyaadka Xuuthiyiinta ee metala Shiicada laga tiro badan yahay ee dalka Yemen, waxayna casileen Madaxweynanha iyaga oo xabsi guri geshey waxaana ay kal direy baarlamaankii Yemen.
Dhex-dhaxaadiyaha Qaramada Midbeey ka socda Benomar ayaa sheegey in heshiiskan aanu ahayn kii u danbeeyey, wuxuuse ku tilmaamey ‘waddada lagu gaaraayo heshiis dhamaystiran’.
Heshiiska cusub waxaa ka mid ah in Golihii Wakiilada ee dalka Yemen, kuwii taageersanaa Xuuthiyiinta la soo wada celiyo, halka aqalka sare ee dhaqanka ay ka mid noqonayaan golaha cusub ee lagu heshiiyey, kuwaas oo aan la qeexin cadadkooda, waxaana ay meteli doonaan dhamaan qaybaha dalka Yemen ka kooban yahay.
Xoghayaha Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ayaa sheegey uin dalka Yemen burbur qarka u saaran yahay loona baahan yahay in loo gurmado. Dalalka reer galbeedka iyo qaar kamid ah dalalka dersika la ah Yemen ayaa safaaradohoodi xirey dadkoodina kala baxay, kadib markii ay muuqatey in dalku galaayo dagaal sokeeye.